Siilaanyo iyo Faysal Oo Ka Hadlay Halka Loo Dhaqaaqayo Toddobaadyada Soo Socda. « SAWNEWS NETWORK
« Borama::(Sawiro+Warbixin ) Dood ku saabsan Xawaaladaha iyo Saamaynta ay ku yeelatay Bulshada (Presented Maskaxmaal)
Xukuummadda Somaliland oo Shuruudo ku Xidhay Xujaajta Sanadkan Iyo Khatarta Hargabka Doofaarka »
Siilaanyo iyo Faysal Oo Ka Hadlay Halka Loo Dhaqaaqayo Toddobaadyada Soo Socda.
Posted by Sawnews.tk on November 7, 2009
Hargeysa(SAWNEWS) Nov. 07, 2009 – Gudoomiyayaasha labada xisbi Mucaarad ee KULMIYE iyo UCID ayaa niyad-sami ka muujiyay sida ay u socdaan illaa hadda hawlaha loogu diyaar-garoobayo doorashada Madaxtooyada ee la filayo inay dhawaan ka qabsoonto Somaliland.Ka dib markii la isku raacay ee ay xilka la wareegeen Komishanka cusub ee Doorashooyinka qaranka oo ku yimi qodob ka mid ahaa heshiis Lix qodob ka kooban oo lagu soo afjaray khilaafaad laxaad leh oo ka dhashay dibudhaca iyo qaabka doorashadda ayaa waxa soo baxay oo maalmihii ugu danbeeyay dad-weynuhu is weydiinayeen su’aallo la xidhiidha talaabadda xigta ee loo qaadayo dhinaca doorashada Madaxtooyada Somaliland, maadaama laga faraxashay bedelaada Komishankii hore ee doorashada oo loo arkayay inay qayb ka noqdeen khilaafka.
Sidoo kale, waxa soo baxayay oo dadku is weydiinayeen goorta ay immanayaan Somaliland khuburo caalami ah oo qodobada heshiiska Lixdaa ah ku jirtay inay dib u eegaan Komishankana kala shaqeeyaan Liiska diiwaan gelinta codbixiyayaasha si loogu jaan-gooyo waqtiga doorashadu dhacayso.
Haddaba, Wargeyska Geeska Afrika isaga oo su’aalahan iyo kuwa aan ka fogeyn ka duulaya ayaa waxa u suurtagashay inuu wax ka weydiiyo Gudoomiyayaasha labada xisbi Mucaarad Faysal Cali Waraabe iyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID Eng Faysal Cali Waraabe oo uu Geeska Afrika weydiiyay talaabada furan ee ay tahay in waqtigan loo qaado dhinaca doorashada ayaa waxa uu yidhi. “Horta, marka ugu horeysa kow waxa ka ah mashruucan iyo hawsha doorashooyinka, fureheedu waxa weeye inuu Komishan lagu kalsoon-yahay jiraa, laba waa inay jirtaa diiwaan-gelini. Markaa, immika Komishankii cusbaa waa aynu haysanaa, diiwaangelintiina waynu haysanaa.
Markaa, waxa looga guddbiyaa xubnahan Komishanku waa niman aynu ku xulanay aqoontooda, balse malaha waaya-aragnimo doorasho oo aqoon ummalaha oo hore ugamay soo shaqayn doorashooyin, markaa waa in iyaga horta la siiyaa Tababar ay bixinayaan dad khuburo ah oo aqoon fog u leh arrintani. Marka ay taas qaataan ayay iyagu dalbanayaan aqoonyahano farsamo oo la shaqeynaya inta doorashadu dhamaanayso, kuwaasi marka ay hawl-galaan ayaa sidoo kale la dalbanayaa aqoonyahano kale oo ku takhasusay kala sifeynta diiwaangelinta codbixiyayaasha.
Kuwan danbe waxay inaga caawinayaan sidii loo nadiifin lahaa Liiska diiwaan-gelinta, waxa ay inoo sheegayaan inta ay hawshaasi qaadanayso, taas marka ay inoo sheegaan ayaa Komishanku sameynayaan nidaam waqtiyaysan oo ku siman illaa maalinta doorashadda. Waqtigaa ay doorashada ku qabanayaan ayay markaa u soo gudbinayaan Saddexda Xisbi oo ay naga ansixinayaan, kaasoo aanu anaguna diidi karro, waxna ka bedelli karro.” Sidaas ayuu yidhi.
Gudoomiyaha UCID oo aanu weydiinay goorta ay xubnaha Komishanka doorashooyinku u baxayaan tababarka waxa uu sheegay in taasi ku xidhantahay diyaarinta qaadhaanbixiyayaasha Somaliland ka caawinaya doorashooyinka. “Xiliga ay baxayaan waxaan filayaa inay xilkaa qaaday dawladda Ingiriisku.” Sidaas ayuu yidhi Gudoomiyaha UCID, waxaana uu intaa ku daray isaga oo faah-faahinaya goobta ay taba-barka ku soo qaadan doonaan ee la qorsheeyay. “Tababarka waxa ay ku soo qaadanayaan waddan dibada ah oo mar haddii dalkeenii heerka Afraad ee cabiraada nabada la geliyay ma imman karaan iyagu (tababarayaashu), markaa waxay noqonaysaa inay waddamadda dibada u baxaan oo ku soo qaataan aqoon korodhsiga.”
Gudoomiyaha Xisbiga UCID waxa aanu weydiinay oo kale in mucaarad ahaan ay xidhiidh iyo wadda tashi kala leeyihiin arrimahan Xukuumadda waxaana uu ku jawaabay. “Ilaa hadda wax dhibaato ah ma hayno, baahi ay tahay in aanu u kullanaana weli ma imman. Laakiin, waxaanu rajaynaynaa in marka imika hawluhu si rasmi ah u bilaabmaan inay iman doonaan kullamada iyo wadda tashiyada aanu yeelanaynaa”
Waxaana uu Muujiyay Gudoomiye Faysal in ay kalsooni ku qabaan ilaa hadda sida ay hawluhu u socdaan. “Haa waanu ku kalsoonahay oo si fiican ayay u socdaan oo waadigan arkaya ilaa imika sida ay wax u socdaan, maalintii dhaweyd ee dhaarinta Komishankana waa tii Saddexda xisbiba ka qayb galeen, taas waqtiyadii hore ma sameyn jirin Madaxweynuhu, taasoo kalana waxa ay ku tusaysaa in niyad sami ay jirto, waxaanan rajaynayaa in sidaa lagu wadda shaqayn doono, waayo danta dalka, dadka iyo danta xisbi kastaaba sidaas ayay ku jirtaa.” Ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE ayaa sidoo kale uu Geeska Afrika weydiiyay su’aallo aan kuwaa hore ka duwanayn oo la xidhiidha diyaar-garawga iyo talaabada hadda u qorsheysan ee ay tahay in loo qaado dhinaca doorashada waxaana uu ku jawaabay Gudoomiye Siilaanyo oo uu yidhi. “Waxa la isku ogaa waxay ahayd arrintii qarsheysneyd iyo heshiiska la galay ee caalamku inagu dhexdhexaadiyay. Dhib kastaa ha inaga soo marto’e, qaybihiisii hore waa kuwii dhamaaday. Talaabadda xigtaana waxay ahayd oo fure u ah marka komishanka cusubi fadhiisto howsha oo dhami waxay ku soo xidhmaysaa Komishankaa cusub iyaga ayaana noqonaya Albaabkii laga galayay. Marka ay shaqada bilaabaana, waxa ugu horeeya ee ay immika ku dhaqaaqayaana waxa weeye inay Itoobiya iyo meel kale mid ay noqotaba gaadhaan oo tababar yar oo kooban ayay soo qaadanayaan…..marka ay soo noqdaan ee ay howshooda bilaabaan waxa immanaya qoladdii khuburada ahayd ee dib u eegista Serverka kala saaraya diiwaangelinta oo ay abaabulayaan waddamada qaadhaanka bixiyaa, kuwaasoo ku soo xidhmaya qoladan cusub ee Komishanka ah, markaa khubaradda imman doonta ee ku noqon doonta hawsha Serverka, Komishanka iyo xubno farsamo oo aan filayo inay xisbiyadu ku yeelan doonaan ayaa hawshaas gelaya. Komishanka ayaana hawshan xudun u ah oo ay ku soo ururayaan”
Waqita ay imanayaan khubaradu ayaanu weydiinay sidoo kale,”Waxa lagu xisaabtamayaa kolayba billo iyo todobaadyo midna maahee waa ayaamo,” Sidaas Ayuu yidhi Gudoomiye Siilaanyo waxaana uu tilmaamay in ay ku xidhantahay hawshaasi Komishanka cusub oo uu sheegay inay haatan masuuliyadda xoogeedii ku wareegtay. “Waxay ila tahay inay haboontahay in shaqadooda loo daayo oo aan lagu fara-gelin Komishanka” Ayuu yidhi Axmed Siilaanyo.
Gudoomiyaha KULMIYE sidoo kale waxa aanu weydiinay xidhiidhka wadda shaqeyneed ee ka dhaxeeya xiligan hogaamiyayaasha xisbiyada guud ahaan iyo gaar ahaan madaxtooyadda iyo mucaaradka maadaama oo ay shaaciyeen xiligii heshiiska in si toos ah haddba wixii soo kordha looga wadda socon doono, waxaana uu tilmaamay in ay jireen qardoofooyin siyaasadeed oo ka abuurmay xiligii xulista xubnaha Komishanka. “Laakiin, Ilaa hadda hawluhu sidii qorshaha iyo heshiisku ahaa ayay u socdaan” Ayuu yidhi Gudoomiye Siilaanyo waxaana uu muujiyay Kalsooni uu ku qabo diyaar-garowga hawsha doorashadda Madaxtooyadda.
Dhawaan ayaa gudoomiyaha KULMIYE waxa laga horjoogsaday ka qayb-galka xuska sanad-guuradii koowaad ee ka soo wareegtay Qaraxyo Saddaxan ahaa oo lala beegsaday 29/October/2008 magaaladda Hargeysa, kaasoo munaasibad loogu baroor diiqayo dadkii wax ku noqday lagu qabtay Xarunta madaxtooyadda Somaliland. Haddaba is hortaagistaas oo uu sameeyay Sarkaal ka tirsan ciidamadda Nabad-galyada wadooyinka ayaa waxa ka hadlay taliyaha Taraafikada oo raali-gelin ka bixiyay, waxaana la sheegay in arrintaas taliyaha raali-gelinta bixiyay lagaga wareejiyay xilkii. Sidaa darteed su’aal ka gaar ah mawduuca diyaar-garowga doorashada oo aanu Arrintaas Axmed Siilaanyo ka weydiinay ayaa waxa uu kaga jawaabay in aanay macno buuran u sameyn diidmada la is hortaagay ee uu u arkayay uun maamul xumo maadaama Madaxweyne Rayaale ku marti-qaaday. “Shacbigana waanigii ka tacsiyeeyay,” Ayuu yidhi waxaana uu intaa ku daray isaga oo ka hadlay eriga sarkaalka madaxda ka ahaa ciidanka waddooyinka. “Taas in kasta oo aanan ka gun gaadhin, haddii ay sidaa u jirto waxay tilmaamaysaa uun nidaam xumada jirta” Ayuu yidhi
Xigasho: W. Geeska Afrika
This entry was posted on November 7, 2009 at 10:57 am	and is filed under News (Warka). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.